How to use Joomscan to find the Joomla Vulnerability in Backtrack5Linux? | Shwekoyantaw
Published : 1:38 AM Author : shwekoyantaw
တစ်ကယ်တော့ Jommla scan သုံးတယ်ဆိုတာ Hacking လုပ်တယ်လို့မဆိုလိုနိုင်ဘူးဗျ...။ယိုပေါက် vulnerability တွေကို Jommla CMS ထဲမှာပေါက်မပေါက်စစ်ပေးတာဗျ..နောက်ဆုံးထွက် Updated version ဆိုရင် Vulnerabilities 550 လောက်ကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်း ပေးနိုင်တယ်..။ဒါကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာ ကိုကျွန်တော်တင်ပြရေးသားပေးပါ့မယ်...။ Jommla scan မရှိလျှင် jommla scan ကိုအောက်ပါနေရာတွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါ...။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ directory အတိုင်းထားပေးလိုက်ပါ...။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ Joomscan ကို set permission လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်Terminal ထဲကိုသွာပြီးအောက်ပါ commands များကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ..။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ နောက်ဆုံးထွက် version ကို update လုပ်ရမယ်..အဲလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် Terminal ထဲကပဲ ၀င်ပြီးတော့ အောက်ပါ commands တွေကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ...။
ဒါဆိုရင်အားလုံး OK ပြီ..စလို့ရပြီ...ကျွန်တော်တို့ Jommla scan ကိုသုံးပြီးတော့ ယိုပေါက်တွေကို စတင် ထောက်လှမ်းနိုင်ပါပြီ ထိုဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက်ကတော့ ကိုယ်ရဲ့ Hacking scale နဲ့ဆိုင်ပါတယ်....။ Terminal ထဲကိုသွားပြီးတော့အောက်ပါ command ကိုသုံးပြီစတင် စစ်ဆေးနိုင်ပါပြီ...။
./joomscan.pl -u www.YourJoomlasite.com..
www.YourJoomlasite.com ဆိုတဲ့နေရာမှာ သင့် Terget ဆိုက်ကိုထည့်ပါ...။ပြီးရင် စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ကို ခဏစောင့်ပါ....။ယိုပေါက်ရှိပါက ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်...။လုံခြုံရေးအားကောင်းတဲ့ ဆိုက်များအတွက် အာမ မခံပါ...။
Labels: Backtrack, Exploit, tutorial, website |
Creating Andriod Trojan in5steps
..:: How to upload shell via Wordpress ::..[2 meth...
[Tut]Error-Based SQL Injection[/Tut]
[TUT]Vbulletin Forum Hacking with Header-Based SQL...
Many Kind Of DDOS
Great work !!!! Myanmar cyber counter ddos team (M...
How to use Joomscan to find the Joomla Vulnerabili...
BD Site is hacked by Chinese Hackers
Come Back MCST For BD Cyber Operation
Some Examples for SE